Noho ny setrasetra sy fifanenjehan’ny taksiborosy… : olona roa no indray namoy ny ainy tetsy Sabotsy Namehana | NewsMada
Raim-pianakaviana roa no indray namoy ny ainy, noho ny lozam-pifamoivoizana nitranga tetsy Sabotsy Namehana, omaly tolakandro. Noho ny setrasetra vokatry ny fifanenjehan’ireto taksiborosy roa miasa amin’ny zotra Antananarivo-Anjozorobe ny nahatonga ny loza.
Lalana efa tery, ireto taksiborosy roa mampitohy an’Anjozorobe sy Antananarivo nifanenjika. Nifatratra tamin’ny toeram-pivarotana iray eny an-toerana ilay fiara iray, ary mbola nandona olona roa ihany koa teny Sabotsy Namehana, omaly tokony ho tamin’ny 3 ora tolakandro. Nirodana ny trano ary nanototra ny rangahibe iray. Niezaka nanavotra ny olona teny amin’ny manodidina teo anoloan’izany. Naratra be, ary voa mafy teo amin’ny lohany ilay raiamandrenibe. Feno ra ny lohany ary nezahina notsaboina izy io, saingy voalaza fa tsy tana ny ainy. Ny iray kosa nalefa any amin’ny hopitaly, aty namoy ny ainy avy eo.
Ilay mpamily ilay taksiborosy kosa, voalazan’ny olona teny an-toerana fa nitsoaka raha vao nitranga ny loza. Nisahotaka nitangorona sy namonjy ilay rangahy voadona sady voatototry ny biriky ny olona ka tafaporitsaka izy io. Raha ny vaovao voaray, fantatra fa efa any am-pelatanan’ny mpitandro filaminana ilay mpamily.
Araka ny fanazavan’ny mpandeha tamin’ilay takisborosy, efa tany aloha tany ireo fiara roa no nifanenjika. “Efa nisy fotoana efa saika niharan-doza izahay, saingy afaka ihany fa teto Sabotsy Namehana vao tsy afaka intsony. Mafy loha tsy azo tenenina ny mpamily raha mba niteny ny mpandeha”, hoy ny fanamarihan’ny olona anisan’ny tao anaty fiara.
“Efa fanaon’ireo taksiborosy mankany avaratra, any Anjozorobe, ireo ny mandeha mafy. Maromaro ihany loza efa niseho vokatr’izany”, hoy ny olona teny Sabotsy Namehana. Iarahan’ny rehetra mahita rahateo ny voka-dratsin’ny fandehanana mafy, indrindra ny ataon’ny taksiborosy sy ny taxi-be. Mety ireo mpamily tsy mahay na tsy mahafehy ny fiara entiny ka mitera-doza hatrany. Malaza be eto amintsika rahateo ny “permis” vorontsiloza, ka mety ho izany no ananan’ny mpamily ireny fiara ireny amin’ny ankapobeny. Sady tsy mahalala fomba, tsy manam-pahalalana mba manaja ny hafa sy mitsonjo ny ain’ny hafa akory ry zareo ireny. Manginy fotsiny ny loto anaty fiara, ny fofona sns. Sao fotoana hanomezana fiofanana ireny mpamily fiara fitateram-bahoaka ireny izao? Tompon’andraikitra amin’izany ny fanjakana.
Une réponse à "Noho ny setrasetra sy fifanenjehan’ny taksiborosy… : olona roa no indray namoy ny ainy tetsy Sabotsy Namehana"
R'Abel Hataka 14/03/2016 à 08:05
Faut peut-être empaler tous les chauffeurs qui commettent ce genre d’accident : remarques fort à propos sur le niveau d’éducation et d’instruction des chauffeurs de taxi-brousse !